Imveliso Eyimali abaqondisi-mthetho, Umthetho Firms kwi-Russia kuba Wonke Isixeko - Russian Lamagqwetha-Intanethi luhlomle kuwo - Zonke abaqondisi-mthetho kwi-Russia! Oyena lawyer portal.
Imveliso Eyimali abaqondisi-mthetho, Umthetho Firms kwi-Russia kuba Wonke Isixeko - Russian Lamagqwetha-Intanethi luhlomle kuwo
Umthetho Ifemi ke Isixhosa Amanqaku R
RUSSIAN Isemthethweni Inkampani ifumaneka Ngcwele Marengo, i-Russia waza wakhonza yayo olingqongileyo kubandakanywa Moscow kwaye Rostov OmkhuluKuba phezu ubudala, opheleleyo-nkonzo umthetho ifemi iye yanceda abaxhasi kulo lonke territory ye-isirashiya kwaye CIS amazwe. Uyakwazi silindele. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Amanqaku Russian Isemthethweni Udibane yi-medium-sized umthetho ifemi esekelwe kwi-Moscow, i-Russia.
Oko inikezela libanzi umqolo iinkonzo kwi-enkulu imihlaba ye-Russian umthetho wepalamente, kuquka corporate umthetho, isivumelwano umthetho, real estate kwaye ilizwe umthetho, basebenze umthetho, intellectual property, wokhuphiswano.
Kokubonisana kwi-St. Marengo, i-Russia ibonelela ngenkxaso isemthethweni iinkonzo kuba abaxhasi abo benze ishishini kwi-Us. Zethu ifemi limele amashishini kuzo zombini Isirashiya kwaye ngaphandle kweli lizwe. Sisebenzisa abazinikeleyo ukuba ukukhusela abaxhasi bethu' umdla kwi-ishishini iinkundla. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Zethu Moscow-ofisi sesinye likhulu phakathi wamazwe ngamazwe firms kwi-Russian yentengiso, kunye phezu abaqondisi-mthetho ezifundisa i-impressive roster ka-inkulu domestic kwaye multinational abaxhasi. Sisebenzisa widely lunxulumano njengokuba wekhredithi ka-premium iinkonzo, specially kwi kwiindawo imbambano. Ezinye ii-Ofisi: St. Marengo Umthetho Ifemi ke Isixhosa Zethu Moscow-ofisi bridges ezi inxenye, umnikelo zethu abaxhasi eyodwa iinkalo zobuchule lwayo oluvela decades ka kwi emhlabeni amava kule ngingqi kunye imbono ukusuka numerous yehlabathi imibiko yemicimbi kwaye ukususela ezikhokelela enkulu umlinganiselo iiprojekthi. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Dechert ke, Moscow-ofisi encompasses isirussian, U.S. isixhosa kwaye isininzi-umntu abaqondisi-mthetho abo umsebenzi ngokusondeleleneyo kunye Dechert ke abaqondisi-mthetho kwi-UK, continental Yurophu, i-United States kwaye Asia kwi emnqamlezweni-umda ngamazwe imicimbi. Nabaqondisi-mthetho anike isebenziseke, ushishino-oriented izisombululo. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ngu inkokeli phakathi wamazwe ngamazwe firms, ngokubonelela ishishini umthetho ingcebiso ephezulu umgangatho kulo lonke Yurophu, Kumbindi Mpuma, e-Asia kunye NATHI. Kunye phezu, abaqondisi-mthetho kwi- iqhosha ishishini centers jikelele ehlabathini, sinike elizeleyo. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Russian abaqondisi-mthetho-Intanethi ingaba ezikhokelela umthetho ifemi kwi-CIS ne-ofisi kwi-Russia, Ukraine, Belarus kwaye enxulumene ofisi kwi-UK ne-USA. Waseka ngowe, Ifemi inika uluhlu olupheleleyo neenkqubo zomthetho iinkonzo domestic kwaye langaphandle amashishini, governmental abasemagunyeni. Ezinye ii-Ofisi: Moscow Umthetho Ifemi ke Isixhosa Orrick owes yayo reputation ukuba uphawu, imfezeko, nako, kwaye entrepreneurial umoya yayo abaqondisi-mthetho kunye nabasebenzi, iqala nge-founders Jarboe, Goodfellow, Eells, kwaye Orrick, kwaye siqhubeke namhla.
Zethu iinkalo zobuchule kwi-public finance and corporate umthetho izikhondo ukususela seminal.
Umthetho Ifemi ke Isixhosa-Russian Isemthethweni Udibane sesinye likhulu kwaye uninzi diversified umthetho firms kwi-England. Nge-ofisi kwi-isibhozo Canadian centres kwaye Moscow kwaye London, inika epheleleyo dibanisa umbala neenkqubo zomthetho iinkonzo kwisizwe abaxhasi. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Uvinson Elkins L. ufumana i-global umthetho ifemi practicing kwi-enyanisweni zonke kwiindawo zasekuhlaleni umthetho kwaye abanye kwiindawo mhlophe collar wolwaphulo-mthetho. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Baker Botts' inxaxheba koluntu Irussia Commonwealth ka-Geqe States (CIS) imihla emva ngoo- xa ifemi advised enkulu amandla umxhasi kwi enkulu igesi yendalo projekthi kwi-yangaphambili Soviet Union. Baker Botts evuliweyo a Moscow-office kwi- ukuya kuhlangana lokukhula umxhasi. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Seredin partners yi Russian boutique umthetho ifemi. Bethu ukuba ingaba arbitration kwaye litigation kuphela. Moscow abaqondisi-mthetho yi iqela le ngokwenene multi-izakhono abaqondisi-mthetho kunye ngamazwe amava. Sino amava kwi-litigation, bankruptcy iingxoxo, IP umthetho, corporate umthetho, izivumelwano, banking, usapho olunxulumene imiba nezinye iindawo. Thina ikakhulu senzo IP, litigation kwaye umelo. Isemthethweni isicwangciso-Buchule Club yi yi boutique umthetho ifemi ekuboneleleni tailored ngokupheleleyo-umqolo isemthethweni iinkonzo ngamazwe amakhulu kwaye private abaxhasi. Eli qela ezijolise ukuxhasa ngamazwe urhwebo, M - A, JV kwamathuba emisebenzi kwaye complex private ezilinganayo kwaye nokulinga amaphulo kuba ngokubanzi umqolo we imizi-mveliso I-Moscow-ofisi sele ephambili imali yentengiso iqela yithi rhoqo advising issuers, utyalo-mali iibhanki nezinye Russian imali yentengiso abathatha inxaxheba kwi-ngamazwe kunye nelindle securities enyukayo.
K L Amasango LLP limele ezikhokelela yehlabathi amakhulu, ukukhula koqoqosho eliphakathi-kwimakethi iinkampani, ikomkhulu kwiimarike abathabatha inxaxheba entrepreneurs kwi-wonke enkulu ishishini iqela ngokunjalo necandelo likarhulumente karhulumente, namaziko emfundo, philanthropic organizations kwaye abantu.
Zethu senzo ngu robustly a.
Lidings Umthetho Ifemi ngoku advises ngaphezulu kwama- ngamazwe iinkampani ukusuka ku- amazwe kubandakanywa inani Fortune iinkampani. Siza kugxila ekuboneleleni isemthethweni icebiso langaphandle amashishini kwi-Us. Phezu Ifemi ke abaxhasi ingaba multinational iinkampani kwaye amakhulu.
Thina lokucebisa kwimakethi.
Morgan Lewis esekwe kwi-ofisi Moscow, i-Russia, i-almaty, Ekazakhstan, ngo, kunye ukongeza a iqela le abaqondisi-mthetho ukusuka ngabemi ngamazwe ifemi okokuba baqalisa zokusebenza kummandla kwi-s.
I-ofisi amele abaxhasi kummandla encompassing i-isirashiya.
Moscow Lamagqwetha-Intanethi, Attorneys e Umthetho imidlalo yabo abaxhasi ngokupheleleyo umqolo we-isemthethweni iinkonzo ezininzi rhoqo kufunwa yi-namhlanje ke, amashishini.
Ngokubhekiselele kwi-ofisi kwi-Moscow kwaye London Umthetho Ifemi sijongana ngemiba abathenga kumazwe angaphandle kwaye umthetho, ngokunjalo ukumelwa yakho.
UGQR AJU sesinye Korea ke ishumi likhulu umthetho firms kunye phezu abaqondisi-mthetho kwaye siqhubeke yandisa yayo yehlabathi womnatha ka sebe ofisi ngo besebenza affiliation kunye phezulu umthetho firms ngaphesheya. Ngojanuwari, Ngo, Aju Wamazwe ngamazwe Iqela, corporate umthetho ifemi ukuba waba waseka ngo- lungisa kunye. Russian Lamagqwetha waba waseka yi-Umnu Andreas Sofocleous ngowe. Ifemi ngoku omnye likhulu kwaye uninzi ngempumelelo umthetho firms ka-Ecyprus kwaye Empuma Yurophu. Yalo engundoqo ofisi ingaba situated kwi-Limassol, offshore ishishini umbindi we Ecyprus, kunye amasebe kwi-Moscow, i-kiev, London kwaye i-tbilisi kunye.
Isitshixo kwiindawo zethu isemthethweni kwaye irhafu iinkonzo kuba ngamazwe abaxhasi ngala: drafting ka-izivumelwano, Mergers Acquisitions, corporate, ushishino, ukhuphiswano kwaye antayi-trust umthetho, isemthethweni inkxaso entrepreneurial umsebenzi, ngqo investments ngaphakathi kwemida yomthetho inkampani ukumiselwa kwebandla kwaye takeover, irhafu.
RUSSIAN Isemthethweni Bureau LLC, lisekwe ukukhuthaza izinto ezichaphazela langaphandle abatyali-mali kwi-Russian domestic kwiimarike nokunikezela ngenkxaso isemthethweni ngenkxaso yabo ishishini imisebenzi kwi-yangaphambili Soviet Union states, ngokunjalo ukuba procure epheleleyo abakhasayo isemthethweni inkonzo ye domestic amashishini kunye ekhuselekileyo.
Iyabala Associate - Orlando Russian Inkcubeko Society
Компанийн бүртгэлийн үйлчилгээг Оху - нягтлан бодогч Оху